प्रदेश १ सुदूरपश्चिमसँग स्तब्ध : RajdhaniDaily.com -
Home Not-to-be-missed प्रदेश १ सुदूरपश्चिमसँग स्तब्ध
काठमाडौं । स्पिनर लक्ष्मी साउँदको ह्याट्रिक विकेट लिएपछि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता च्याम्पियन प्रदेश–१ सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग ४० रनले स्तब्ध बनेको छ । १ सय ३० रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश–१ १८ ओभर ५ बलमा ८९ रनमा अल आउट भयो ।
सुदूरपश्चिमकी स्पिनर लक्ष्मी साउँदले ह्याट्रिक लिँदै सहज जित दिलाइन् । प्रदेश–१ का लागि कप्तान रुविना क्षत्री बेलबासेले सर्वाधिक २७ रनको योगदान दिइन् । काजल श्रेष्ठले ४ रन जोडिन् । आठौं ओभरको चौथो बलमा कविता कुँवरले कप्तान रुविनालाई बोल्ड आउट गरेपछि प्रदेश १ को जितको सम्भावना कठिन बनेको थियो । १४औं ओभरको पाँचौं बलमा कविता जोशीले अप्सरी बेगमलाई २२ रनमा बोल्ड आउट गरिन् ।
लगत्तै अर्को बलमा लाकिता राजवंशीलाई शून्यमा एलबीडब्लू आउट गरिन् । लक्ष्मी साउँदले रोमा थापालाई ५ रनमा बोल्ड आउट गरेपछि जितको सम्भावना टाढिएको थियो । लक्ष्मीले १९औं ओभरमा ह्याट्रिक विकेट लिइन् । तेस्रो बलमा सबनम राईलाई ऋतु कनोजियाबाट शून्यमा क्याच आउट गराइन् । अर्को बलमा स्मृति कुटवाललाई २ रनमा एलबीडब्लू आउट गरिन् ।
पाँचौं बलमा ज्योति दनुवारलाई कविता कुवँरबाट क्याच गराउँदै ह्याट्रिक हात पारेकी थिइन् । लक्ष्मीले ३.५ ओभरमा १९ रन खर्चेर ४ विकेट लिइन् । कविता कुँवरले ४ ओभरमा २३ रन खर्चेर २ विकेट लिइन् । कविता जोशीले २ र सुनिता लोहारको नाममा १ विकेट रह्यो ।
त्यसअघि त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १ सय २९ रन बनाएको थियो । सुदूरपश्चिमकी बिन्दु रावलले सर्वाधिक ५२ रनको योगदान दिइन् । दोस्रो विकेटका लागि रेवती धामी र बिन्दु रावलले ७४ रनको साझेदारी गर्दै टोलीलाई बलियो योगफलको आधार तय गरेका थिए । रेवती ३० रनमा रन आउट भइन् । कविता जोशी २१ रनमा आउट भइन् । डली भट्ट ८ रनमा अविजित रहिन् । प्रदेश १ की सबनम राईले ४ ओभरमा १७ रन खर्चेर २ विकेट लिइन् । ज्योति दनुवारले १ विकेट लिइन् ।
काठमाडौं । करिष्मा मानन्धरको सुन्दरताको चर्चा सबै भन्दा धेरै हुने गरेको छ । भरखर करिअर सुरु गर्दै गरेका नायिकाहरु समेत उनको सुन्दरताको प्रसंगमा नतमस्तक...
बिचार राजधानी समाचारदाता - May 22, 2020 0
जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र यी स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने उद्देश्यले सन् १९९२ मा आजको दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय जैविक विविधता...
प्रदेश १ राजधानी समाचारदाता - December 22, 2020 0
इलाम । विश्वमै लोपुन्मूख रहेको रेडपान्डा (हाब्रे) संरक्षणका लागि इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका पाँचस्थित जौवारीमा वृक्षरोपण सुरु गरिएको छ । रेडपान्डा आवतजावत गर्ने जैविकमार्ग संरक्षण...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - March 23, 2021 0
काठमाडौं । काठमाडौंको जमलस्थित सांस्कृति संस्थान, राष्टिय नाचघर यतिबेला बुद्ध नाटकमय भएको छ । आइतबारबाट त्यहाँ बुद्ध थिएटर फेस्टिभल सुरु भएको हो । भगवान् गौतम...
प्रदेश २ राजधानी समाचारदाता - June 2, 2020 0
डा. डीआरको छोरीप्रति समर्पित नयाँ गीत
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - July 1, 2020 0
काठमाडौं । गीत लेखेरै विश्वरेकर्ड बनाएका गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको यतिबेला नयाँ गीत ‘म केही भन्छु....’को भिडियो दर्शकमाझ ल्याएका छन् । यो गीत उपाध्यायको...
महामारीको मौकामा यातायात व्यवसायीको महालुट
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - May 1, 2020 0
काठमाडौं । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को मौकामा बस व्यवसायीले यात्रुसँग बढी भाडा असुल गरेर लुट मच्चाएको पाइएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा...
रोनाल्डोले फालेको आर्मब्यान्ड अक्सनमा
Editor-Picks एजेन्सी - April 1, 2021 0
बेलग्रेड । पोर्चुगिज सुपरस्टार तथा कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले खेल दौरान आक्रोशमा आएर फालेको कप्तानको आर्मब्यान्ड आर्थिक संकलनका लागि अक्सनमा राखिएको छ । कतार विश्वकप...
आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्ने चालकसहित १६ जनामा कोरोना संक्रमण
बारा । नेपाल आयल निगम बाराका इन्धन ढुवानी गर्ने चालकसहित १६ जनामा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको छ । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर २१ स्थित...